हंस ब्रिंकरको द लिजेन्ड | Absolut यात्रा
रन XIX शताब्दी र उत्तर अमेरिका मा एक बच्चाहरूको किताब सबैभन्दा लोकप्रिय थियो हंस ब्रिंकर वा सिल्वर स्केट्स, द्वारा लेखिएको मेरी नक्सा डज। सानाको लागि साहित्यको एक बेस्टसेलर।
त्यस समयमा कुनै चलचित्रहरू थिएनन्, कुनै भिडियो गेमहरू थिएन, र कुनै टेलिभिजन पनि थिएन। त्यहाँ केवल साहित्य थियो र यसमा धेरै विधाहरू जुन विभिन्न दर्शकहरूको उद्देश्य थियो। स्वाभाविक रूपमा, यो अझै पनि मामला हो, तर आजकल लेखनमा ठूलो प्रतिस्पर्धा छ। अझै दुई शताब्दी पहिले यो बाल उपन्यास यो हेरी पॉटरको रोमांच आजको जस्तै प्रख्यात थियो।
1 हंस ब्रिंकरका लेखक
3 हंस ब्रिंकर वा सिल्वर स्केट्स, संस्करण
हंस ब्रिंकरका लेखक
यो उपन्यास १1865। मा प्रकाशित भएको थियो अमेरिकी द्वारा मेरी नक्सा डज। मेरीको जन्म जनवरी १ 1831१ मा न्यु योर्क शहरमा भएको थियो। उनी गृहिणी र शिक्षक, आविष्कारक र रसायनशास्त्रीकी छोरी थिइन, त्यसैले उनीसँग राम्रो शिक्षा थियो। धेरै जवान, तर समयको आधारमा, उनले २१ वर्षको उमेरमा वकिल, विलियम डजसँग विवाह गरे, र उनको अन्तिम नाम परम्पराको रूपमा अपनाए।
अर्को चार वर्षमा उनीका दुई छोरा र १ 1858 XNUMX मा उनका पतिले उनलाई त्यागे केहि समय पछि डुबेको देखा पर्न क) हो, २ 27 वर्षको उमेरमा उनी विधवा भइन् समर्थन गर्न दुई बच्चाहरूको साथ। उनका बुबाआमाले उनलाई मद्दत गरे र अर्को वर्ष उनको साहित्यिक बेचैनीले फल फलायो दुई पत्रिकाहरू र केही छोटो कथाहरू लेख्नुहोस् र प्रकाशित गर्नुहोस्।
एक दिन उनीहरूले उनलाई उपन्यास लेख्न भने र छोटो कथाहरू नभई उनी जन्मेको हो भने हंस ब्रिंकर। यस्तो देखिन्छ कि उनी जोन एल मोटलले लेखेका कथाहरूको शृ by्खलाबाट प्रेरित थिए। डच गणतन्त्र को जन्म, १ 1856 XNUMX बाट,eनेदरल्याण्ड्स को इतिहास।
सत्य यो हो कि मेरीले नेदरल्याण्ड्सको यात्रा कहिल्यै गर्नुभएन, तर उनले यस देशको बारेमा थोरै कुरा पत्ता लगाइन र डच भाषामा उनका छिमेकीहरूको अन्तर्वार्ता लिएर क्षेत्र अनुसन्धान गर्नुभयो। जे होस् तपाईं कहानी पढ्नुहुन्छ भने तपाईं धेरै डच नामहरू आउँनुहुन्न, बरु जर्मनहरू।
तर मेरीले आफ्नो गृहकार्य राम्रो गरिन्, त्यसैले उपन्यासमा यस संस्कृतिको बारेमा धेरै राम्रो जानकारी छ जुन अमेरिकी आँखाले अज्ञात थियो। यसैले यो वास्तवमै द्रुत रूपमा लोकप्रिय भयो र यो एक बेस्टसेलर थियो आफ्नो प्रकाशनको पहिलो वर्षमा, केही उसले पहिले हासिल गरेको हो हाम्रो आपसी मित्रचार्ल्स डिकेन्स द्वारा। त्यसबेला देखि यो जहिले पनि प्रेसको भित्र र बाहिर जान्छ र आज तपाईंले यसलाई खोज्न पनि सक्नुहुन्छ अनलाइन पढ्नुहोस्।
त्यहाँ छ फिल्म अनुकूलन? हो, वास्तवमा त्यहाँ विभिन्न ढाँचामा धेरै अनुकूलनहरू छन्। अर्थात्, १ 1958 .XNUMX माaसंगीत लाइभ टिभी, १ 1962 .२ मा डिज्नी टिभी चलचित्र जुन दुई भागमा प्रदर्शन गरिएको थियो; १ 1969 1998। मा एनबीसीले १ ical XNUMX in मा अर्को सical्गीत बनायो डिज्नी च्यानल लस एन्जलसमा सेट गरिएको मूल फिल्म संस्करणको एक राम्रो गरीब रूपान्तरण गरियो, र अन्तमा, २००२ मा एक रूसी फिल्म शट गरिएको थियो, चाँदीको स्केट्सकहानीको एक नि: शुल्क संस्करण।
नेदरल्याण्ड्स पनि इतिहास को ख्याति मा राजधानी छ त्यहाँ केही मूर्तिहरू छन् यहाँ र त्यहाँ, एट्लान्टिकको त्यो पक्षमा कथा यति धेरै चिनिएको छैन। तर अझै, त्यहाँ एम्स्टर्डममा एक होस्टल छ हान्स ब्रिंकर पनि।
उपन्यासले एउटा गरीब तर इमान्दार १-बर्षे केटाको कथा बताउँछ जो एम्स्टर्डममा आफ्नी आमा र बहिनीसँग बस्दछन्। सहरमा नियमित रूपमा आइस स्केटिंग रेस डिसेम्बर र प्रसिद्ध शहर को नहरहरु मध्ये। पुरस्कार चाँदी स्केटको एक जोडी हो।
अवश्य पनि, भाग लिनु भनेको हान्सलाई सबैभन्दा चाहिने कुरा हो, तर गरिब हुनु को धेरै अवसरहरु छन् उसको नम्र काठको स्केटको साथ। साथै, कथालाई अझ दुःखी बनाउनको लागि, हंसका बुबाले आफ्नो स्मृति गुमाए। एक दिन काम गर्ने क्रममा ऊ बाँधमा खसे र त्यसबेलादेखि उसको स्मृतिविना र आधा ट्रान्समा जीवन बिताएको छ, आधा हिंस्रक बिरोधले, आफ्नो बाँकी परिवारलाई बाँच्नको लागि काम गर्न बाध्य पार्‍यो।
तर हान्स एक राम्रो केटा हो र उसले आफ्ना बुवालाई माया गर्छ, त्यसैले एक दिन उसले एक प्रतिष्ठित शल्य चिकित्सकसँग सल्लाह लिए, डा। बोकेमान, एक सेवानिवृत्त चिकित्सक र हराएको छोराको साथ विधवा। १ 15 बर्षे केटाको मनोवृत्ति देखेर छक्क परे, उनी आफ्नो बुबालाई भेट्न सहमत हुन्छन् र उनलाई समीक्षा गरेपछि उनको निदान दिन्छन्: एक हडबड छ र शल्य चिकित्सा को आवश्यकता छ।
स्पष्ट रूपमा, शल्यक्रिया महँगो छ र उनी आफ्नो गरिब परिवारको पहुँचबाट बाहिर छन्। शल्यचिकित्सकले अपरेसनको लागि शुल्क नलिन निर्णय गरे, तर अझैपनि हान्सले देख्छन् कि उसलाई पैसा चाहिन्छ र उसले पाउनु पर्ने एक मात्र अवसर हो। दौडमा भाग लिनुहोस् र सिल्वर स्केट्स जीत्नुहोस्। निर्धारित गरी, हंसले आफ्नो सबै थोरै बचत खर्च गर्छ र दुई जोडी स्केटहरू किन्छ, एउटा आफ्नो लागि र अर्को उसको बहिनी ग्रेटेलको लागि, जसले पनि भाग लिने छ।
नयाँ स्केटहरू स्टिलले बनेको छ र काठबाट बनेको पुरानो भन्दा राम्रो छ। र आइस स्केटि race रेसको ठूलो दिन आइपुग्छ। ग्रेटल केटी कोटीमा जीत गर्छ र आफ्नो चाँदी स्केट जीत। आफ्नो पक्षको लागि, हान्ससँग जित्ने मौका छ तर आफ्नो साथीलाई हराउछ जसलाई उसको भन्दा बढी पैसा चाहिन्छ। केटा इमान्दार र असल हृदयको छ।
अन्त्यमा, डा। बोकेमानले अपरेसन गर्न सक्दछन् र हान्स ड्याडे सामान्यमा फिर्ता छ। यससँग, परिवारको अवस्था सुधार हुन्छ, तर यसले अझ सुधार्छ जब तिनीहरूले लुकाइएको खजाना भेट्टाउँछन्। भाग्यको डबल स्ट्रोक र बोनसको रूपमा, डाक्टर जसले आफ्नो छोराको थाँहा जान्दैनन् उसलाई भेट्टाउने प्रबन्ध गर्दछ।
अनि ती बहादुर र इमानदार केटा के गर्ने? अन्ततः डाक्टरले चिकित्सामा उसको क्यारियर प्रवेश गर्न मद्दत गर्दछ हंस प्रतिष्ठित डाक्टर बन्छन्। क्लासिक खुशीको अन्त्य, हैन त?
हंस ब्रिंकर वा सिल्वर स्केट्स, संस्करण
अंग्रेजीमा मूल उपन्यास यो १1865 मा प्रकाशित भयो र निकै राम्रो बिक्री भएको थियो। त्यस समयमा बच्चाहरूसँग खेलकुद र पुस्तक बाहेक अरू कुनै किसिमको मनोरञ्जन थिएन, र तिनीहरूलाई पढ्ने वा पढ्ने तरिका जान्नेहरूले यी कथाहरूमा उत्कृष्ट क्षणहरू भेट्टाए।
मेरी नक्सा डजको उपन्यासले अमेरिकी बच्चाहरूलाई ए नयाँ विश्व: स्केटिंग, डच जस्तो विदेशी संस्कृति र एक खुशीको अन्त संग एक राम्रो कहानी।
यसैले, डच-प्रकारको आइस स्केटि popular लोकप्रिय हुन थाले संयुक्त राज्य अमेरिका र मिडियामा जुन राष्ट्रिय विकासको साथ मिलेर बढ्न थालेको थियो। समय बित्यो र आज पनि हंस ब्रिंकर पछिको गति स्केटर जस्तै हो।
यो उपन्यास सोच्नुहोस् समकालीन हो साना महिलाs, लुइस मे अल्कोट द्वारा वा द्वारा अंकल टमको केबिनHarriet Beecher Stowe द्वारा। तीन महिला, १ XNUMX औं शताब्दीका तीन लेखक र युवा साहित्य।
चाँडै नै पछि, अमेरिकी युवा साहित्यहरूमा सबैभन्दा लोकप्रिय पुस्तकहरू, टम सावयर र हकलबेरी फिन उत्तर अमेरिकी विधा र साहित्यिक क्षेत्रको सदाको लागि परिवर्तन गर्न आउने छन्। तर पहिले यो याद गर्नु उपयुक्त छ कि तीन महिलाले सच्चा साहित्यिक क्लासिकहरू लेखेका थिए।
के तपाईं यस किताबको स्पेनिश अनुवाद छ कि भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ? अवश्य! त्यहाँ स्प्यानिश, फ्रान्सेली र इटालियनमा संस्करणहरू छन् र मैले भनें, बस गुग्लिंग गर्दैछ र तपाईं अनलाइन संस्करणमा कथा जान्न, यसलाई पढ्न र यसलाई आजको एक शताब्दी पछि पनि यसको कदर गर्न आउनुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » हंस ब्रिंकरको कथा